The Best Refreshing Dog Mats | Izinja Zomhlaba
Amacansi ezinja aqabulayo umqondo omuhle kakhulu wokugcina inja yakho ipholile emahoreni asehlobo. kushisa kakhulu. Zinethezekile futhi kulula ukuzisebenzisa, ziwusizo olukhulu kulezo zinja ezinesikhathi esibi kakhulu nokushisa, njengoba zizophola ngokuphazima kweso.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngamaragi okupholisa angcono kakhulu ezinja esingayithola ku-Amazon, kodwa sizophinde siphendule imibuzo evame kakhulu ehlobene nalolu hlobo lomkhiqizo futhi sizokunikeza amathiphu ambalwa okufanele uwacabangele lapho uwuthenga. Ngaphezu kwalokho, sincoma futhi ukuthi ubheke lesi sihloko esihlobene amachibi best for izinja.
I-Cadosoigh Carpet ...
Ikhaphethi Elihle ...
Ama-Amazon Basics -...
1 Umata wokupholisa ongcono kakhulu wezinja
1.1 Ukhaphethi ozipholisa
1.2 I-XL i-mat epholile
1.3 Umata oqabulayo ngosayizi abahlukahlukene
1.4 Umata oqabulayo othandekayo
1.5 Ingubo egoqayo eqabulayo
1.6 I-pool Mat eqabulayo
1.7 Iphedi yokupholisa
2 Ayini amacansi ezinja ezipholisayo futhi awenzelwani?
3 Ingakanani inja engaba phezu komata onjalo?
4 Uwusebenzisa kanjani umata wokupholisa?
5 Zinikeza isikhathi esingakanani esipholile?
6 Amathiphu lapho ukhetha umata wokupholisa wezinja
7 Ungawathenga kuphi amaragi ezinja ezipholisayo
Umata wokupholisa ongcono kakhulu wezinja
Uma ufuna umkhiqizo opholile kodwa ngaphandle kwesidingo sokuwubeka efrijini noma efrijini, le modeli ingeyakho. Iqukethe izingqimba eziningana zendwangu, kanye nejeli, epholisa ngokuzenzakalelayo (yebo, ngaphandle kokuba nomthombo wokushisa eduze, ngakho-ke kuzodingeka uyisuse ngaphansi kwenja yakho ukuze uyishaje). Indwangu ayinamanzi futhi kulula kakhulu ukuyihlanza, ngoba kufanele uyisule kuphela ngendwangu emanzi (akufanele ihlanzwe ngomshini). Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa umata kwezinye izinto, njengokupholisa ikhompuyutha, ukuziqabula, ukufaka amakhaza endaweni ebuhlungu ... Itholakala ngemibala emibili nobukhulu obuhlukahlukene.
Yebo, emacomments kuthiwa alinamandla kakhulu, ngakho-ke uma ufuna okuthile okunamandla kuzodingeka ukhethe amanye amamodeli.
I-XL i-mat epholile
Ezinjeni ezinkulu, umata oqabulayo uyadingeka ohambisana nomsebenzi. Le modeli ingu-120 cm ubude, okwenza ibe banzi isikhashana. Iphinde iphole ngokucindezela komzimba wesilwane, njengoba inendawo engaphezulu, kuzothatha isikhathi eside ukushisa (esinye isizathu sokuthi kungani kunconywa ukucabangela ubukhulu benja ngaphambi kokuyithenga). Ngaphezu kwalokho, kulula ukuyihlanza futhi ungakwazi ukuyigoqa kathathu ukuze uthole isitoreji esingcono.
Iphuzu elibi elikhona kumazwana liwukuthi impahla ayimelani kakhulu, futhi kulula ukuba inja yethu ilume kuyo.
Umata oqabulayo ngosayizi abahlukahlukene
I-TRIXIE Floor mat ...
Umkhiqizo owaziwa kakhulu waseJalimane i-Trixie nawo unenguqulo yawo yalezi zinja eziqabulayo. Inosayizi aba-4 abatholakalayo ngamanani aqinile (okubiza kakhulu cishe ama-euro angamashumi amabili) futhi kungenzeka ingenye yamamodeli amancane kakhulu emakethe. Indwangu ilingisa i-polyester futhi, njengamanye amamodeli, ipholisa lapho inja ilele kuyo. Nakuba imelana kakhulu futhi izacile, okunye ukuphawula kugcizelela ukuthi ubusha obunikezayo bulungile.
Umata oqabulayo othandekayo
I-Navaris Carpet ...
Uma ungawuthandi umbala oluhlaza lo mkhiqizo uvame ukuhlotshaniswa nawo, uzoyithanda le modeli, njengoba inemibala emibili (itshe elimpunga nobumba) elinemiklamo eminingana epholile etholakalayo, njengamathambo. Nakuba umata mncane kakhulu, ugcwele ijeli yokupholisa kanye negwebu elenza libe umkhiqizo onethezekile nopholile. Ngaphezu kwalokho, ayinamanzi futhi ingawashwa kalula kakhulu.
Ingubo egoqayo eqabulayo
Ivula Ingubo Yezinja ...
Esinye sezici ezithakazelisayo kakhulu ze Le ngubo epholile yezinja iwukuthi ingagoqwa kakhulu, ngakho-ke ayithathi isikhala futhi ungahamba nayo. kalula kakhulu. Njengoba iphinde iphole ngokuthinta isilwane, ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuyibeka efrijini. Nakuba kungenakumelana kakhulu, ukuthinta kumnandi kakhulu futhi indwangu ayinamanzi, ngakho-ke ingawashwa kalula.
I-pool Mat eqabulayo
I-Iokheira Floor Mat ...
Uma ufuna umklamo omuhle, kuzoba nzima ukushaya le phethini elingisa amanzi echibini lokubhukuda, nakuba kuyimodeli, uma kuqhathaniswa nabanye ohlwini, ebiza kakhulu. Akudingeki ukuthi ifakwe efrijini noma efrijini futhi yakhiwe izingqimba ezintathu zendwangu ukuze imelane ngangokunokwenzeka nezinzipho zesilwane sakho esifuywayo.
Sigcina ngokuthi omunye umata wenja oqabulayo othembisa ukwehlisa izinga lokushisa lomzimba ngezinga nengxenye wenja yakho. Ijeli iyazipholisa, ngakho isilwane sakho esifuywayo kuzodingeka sigibele phezu kwayo ukuze siqale ukujabulela ukupholisa. Amakhaza athatha amahora ama-3 kuye kwayisi-6, okwenza kube kuhle ukulala isikhathi eside.
Ayini amacansi ezinja ezipholisayo futhi awenzelwani?
Amacansi ezinja aqabulayo ayinto eqanjiwe inja yakho engapholisa ngayo emahoreni ashisa kakhulu osuku. Ngokuvamile zenziwa ngezinto ezingenabo ubuthi (njengamanzi namajeli) ezisiza ukugwema ukushisa. Eqinisweni, ziwusizo kakhulu ngoba zisiza ukupholisa inja, ethembele kuphela kuma-paw pads kanye nokuhefuzela ukulawula izinga lokushisa lomzimba wayo (izinja azijuluki ngesikhumba sabo, ngokungafani nabantu).
Le mikhiqizo ziwusizo ikakhulukazi ezindaweni ezinehlobo elishisayo noma isimo sezulu esifudumele unyaka wonkeNgaphezu kwalokho, zivimbela inja yakho ekuphathweni ukushisa futhi zizoyisiza ukuthi ilale kangcono. Ngamafuphi, bazothuthukisa kakhulu izinga lakho lempilo phakathi namahora ashisa kakhulu.
Ingakanani inja engaba phezu komata onjalo?
Njengoba kungewona umshini kagesi, nokuthi ezimweni eziningi wenziwa ngezinto ezingezona ubuthi (khumbula ukuyihlola ngaphambi kokuyinika inja yakho), empeleni ayikho inkinga yokuthi iphole inqobo nje uma ifuna. . Nokho, kuhlale kungcono kuno uma isilwane sakho sisebenzisa imikhiqizo efana nalena, singaphansi kweso lakhoLokhu kubaluleke kakhulu ezinjeni ezithanda ukuncela izinto, njengoba zingadabula ucezu bese ziminyanisa, noma zibhekane nokuvinjwa.
Uwusebenzisa kanjani umata wokupholisa?
Nakuba kuncike kumodeli, Amacansi ezinja aqabulayo ngokuvamile kulula kakhulu ukuwasebenzisa. Eqinisweni, iningi alidingi ngisho nokufakwa efrijini noma efrijini, njengoba lipholisa ngaphansi kokucindezela komzimba wenja. Ukuze uzishaje kabusha, kuzodingeka ukuthi ususe isilwane sakho esifuywayo phezulu isikhashana.
Zinikeza isikhathi esingakanani esipholile?
Futhi, kuzoncika ezintweni zangaphandle ezifana nokushisa noma umkhiqizo ukuze ukwazi ukunquma ukuthi singakanani isikhathi esipholile abazosinikeza inja yethu. Kodwa noma kunjalo, isilinganiso ngokuvamile cishe amahora ayisikhombisa.
Amathiphu lapho ukhetha umata wokupholisa wezinja
Lapho sithengela inja yethu umata oqabulayo, singacabangela amathiphu ambalwa ukuze uzame ukuthola ukuthenga kahle. Isibonelo:
Si inja yakho ithanda ukuluma futhi inomkhuba wokuthatha yonke into, ibheke umata ongazweli ikakhulukazi. Ngaphezu kwalokho, uma uyisebenzisa kufanele ibe ngaphansi kokuqondisa kwakho ukuze wenze isiqiniseko sokuthi, isibonelo, akukho siqeshana esigwinywe esikwazile ukusidabula.
El usayizi wenja Futhi, njengoba kubonakala, kungenye into okufanele icatshangelwe lapho uthenga owodwa wale mikhiqizo. Futhi cabangela ubukhulu besiqandisi noma isiqandisi sakho uma uzokhetha imodeli okufanele ipholiswe ngale ndlela.
Ukubuyela ezinjeni ezithanda ukuluma, noma uma nje ufuna ukuthatha izinyathelo zokuphepha, qiniseka ukuthi izinto okwenziwa ngazo umata azinobuthi.
Ekugcineni, zama ukukhetha a indwangu oyithandayo. Kubalulekile ukuthi inja izizwe ikhululekile uma isebenzisa umata, ngakho-ke, ukwenza izinto zibe lula, bheka indwangu owaziyo ukuthi iyayithanda (isibonelo, efana nengubo yakhe eyintandokazi, usofa ...). Ukuyijwayela, izinsuku zokuqala ungashiya amathoyizi nemiklomelo kukhaphethi ukuze uyixhume nento enhle futhi iqale ukuyisebenzisa ngaphandle kokwesaba.
Ungawathenga kuphi amaragi ezinja ezipholisayo
Mhlawumbe ngoba ziwumkhiqizo othize kakhulu, Kunzima ukuthola amacansi ezinja aqabulayo athengiswa ngaphandle kwezitolo ezikhethekile. Ngakho-ke, uzothola lo mkhiqizo kuphela ezindaweni ezilandelayo:
En Amazon, ngoba banayo yonke into ngokuphelele, futhi phezu kwayo kunamamodeli amaningi ahlukene. Yize kungaba nzima ukuthola umbono wokuthi impahla injani ngaphambi kokuthi ifike, uhlelo lwayo lokubuya nokulethwa luhle kakhulu, ngakho-ke unganquma kalula ukuthi ukuthenga bekulungile noma cha.
Kukhona futhi eziningi izitolo ezikhethekile ze-inthanethi izilwane (ezifana ne-TiendaAnimal, Kiwoko ...) lapho ungathola khona lolu hlobo lomkhiqizo. Into enhle ukuthi ungangena mathupha esitolo futhi ubone ukuthi umkhiqizo unjani (njengosayizi, indwangu ...).
Okokugcina, ku ezinye izikhungo zokuthenga Njenge-Carrefour ungathola nalo mkhiqizo, nakuba ngokuvamile utholakala kuphela ku-inthanethi, njengoba uvame ukuthengiswa abathengisi bangaphandle.
Amacansi ezinja aqabulayo ayindlela enhle yokugcina inja yakho ipholile ngalezo zinsuku ezishisa kakhulu zonyaka. Sitshele, ingabe uke wazama enye yalezi zingubo zokulala? Bekunjani ukuzizwisa kwakho? Nezinja zakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Amaragi okupholisa angcono kakhulu ezinja
Yikuphi ukudla okufanele iminyaka yenja ngayinye?